AIRBNB dia nilaza ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony momba ny fandrarana ny fivezivezena any Etazonia
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » AIRBNB dia nilaza ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony momba ny fandrarana ny fivezivezena any Etazonia
Jona 27, 2018
Androany, nanapa-kevitra ny Fitsarana Tampony Amerikanina fa hitazona ny fandraràna ny fivezivezena noforonin'ny fitantanan'i Trump. Ny fandraràna dia mametra ny teratany avy any Iran, Libya, Somalia, Syria, Venezoela, ary na dia ny "mpiara-dia" vaovao indrindra "an'i Korea Avaratra any Amerika aza, tsy hiditra any Etazonia.
Ity no andiany fahatelo amin'ny fandraràna ny dia hatramin'ny nanombohany ary taorian'ny fitsarana maro. Tamin'ny voalohany, ireo mpitsikera dia niantso ny kinova taloha ho fandraràna ny fanoherana ny Silamo, kanefa ankehitriny dia tsy maintsy dinihin'izy ireo izao marika izao satria tafiditra ao anatin'io fandrarana io koa i Venezoela sy Korea Avaratra. Ao amin'ireo lisitra ireo firenena voatonona anarana satria nilaza ny governemanta Trump fa fandrahonana fampihorohoroana izy ireo na tsy fiaraha-miasa amin'i Etazonia.
Ny mpiara-manorina Airbnb, Brian Chesky, Joe Gebbia, ary Nathan Blecharczyk, dia milaza izany momba ny kinova farany indrindra momba ny fandrarana sy ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony hanohana azy:
Diso fanantenana tanteraka izahay tamin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana. Ny fandrarana ny dia dia politika izay mifanohitra amin'ny iraka sy ny soatoavintsika - ny fameperana ny dia mifototra amin'ny zom-pirenen'ny olona na amin'ny fivavahany dia tsy mety.
Ary na dia fihemorana aza ny vaovao anio, dia hanohy ny ady amin'ny fikambanana izay manampy ireo tratry ny fijaliana izahay. Airbnb dia hampifandray ny fanomezana amin'ny Tetikasa Fanampiana Mpitsoa-ponenana Iraisam-pirenena (IRAP) hatramin'ny $ 150,000 hatramin'ny 30 septambra 2018 ho fanohanana ny asan'izy ireo amin'ny fanovana ny lalam-piovana sy ny lalana ara-dalàna ho an'ireo izay voakasiky ny fandrarana ny dia. Raha te hiaraka aminay ianao dia afaka manomeza eto.
Mino izahay fa ny dia dia traikefa manova sy matanjaka ary ny fananganana tetezana eo anelanelan'ny kolontsaina sy ny vondrom-piarahamonina dia mamorona tontolo manavao, miara-miasa ary manome aingam-panahy. Ao amin'ny Airbnb, feno fankasitrahana izahay noho ny vondrom-piarahamoninay izay hanohy hanokatra varavarana erak'izao tontolo izao mba hiarahanay mandroso.
Ireo mpampianatra mpizaha tany dia mikarakara atrikasa fanofanana Spirit of Hospitality any atsimon'i Thailand
Minisitra: Iran sy Georgia dia tokony hampiditra rafitra banky hanamafisana ny fizahantany